"Apal" Ltd. esuka edolobheni Russian of Togliatti kuyinto nomkhiqizi eyaziwa kahle nokuhleleka okukhulu kits efakwe izimoto iVolga imoto isitshalo. Le nkampani usebenza nge plastic esingaphezu konyaka. Mhlawumbe yingakho kulula ezingemuva-drive Suv sidaliwe, lapho abaningi kangaka futhi asebenzisa ngayo ngokuphumelelayo le nto.
Umlando kokudaliweyo ukukhanya off-road imoto
RWD "Apal-2154 Stalker" wethulwa emphakathini ekwindla ka 2003. Le moto - ekukhuleni wenkampani siqu. Wayesebenza kahle soft ukusonga ophahleni, umzimba plastic futhi ingaphakathi, four cylinder udizili Vaz-341 ukukhiqizwa "Barnaultransmash" ivolumu zokusebenza 1,52 amalitha, futhi amayunithi kakhulu zakudala iVolga "Lada".
"Apal-2154" ihlolwe kanye nokuvivinywa okuhlukahlukene adingekayo izimoto. Lokhu imoto ugunyazwe ngaso ukukhululwa. Kodwa funa okwandile ezingemuva-wheel drive izimoto awazange ke okuhloswe kuphela-oda angawodwana.
Ngo-2006, ukuthi lwenziwe Yihhovisi ezine-wheel drive "Stalker" futhi wafundelwa kungenzeka ukwakhiwa njalo enwetshiwe we van kanye iveni.
Le nkampani "Apal" ngisho inikeza izimoto nje kuphela kodwa futhi mini-izitshalo ukuze akhulule nge imibhalo design namabhizinisi tooling, futhi ngokuzikhethela core.
Iphuzu laliwukuthi ezinhle, kodwa-ke ngeshwa ... "akukho mprofethi + ezweni lakubo." Ngo-2011, kwaba khona isiJalimane wonke-wheel drive TRAVEC ngesisekelo "Stalker". Polutoralitrovye ukukhwezwa kwalo a udizili Romania ukukhiqizwa. Le moto esethulwa emihlanganweni Frankfurt Motor Show.
Inkampani Russian "Apal", ukudala SUV engasindi, wasebenzisa izixazululo lobuchwepheshe eziningana entsha ngokuphelele, ngokusebenzisa kokubili design uthola futhi engabizi kodwa okuthembekile izinto, izingxenye nemikhulu.
Into yokuqala ukuthi ayimkhangi, it is kuphekelwa ekhethekile JIG-isikhala ijabulise Uhlaka eyenziwe mncane-ngabafaka ngamapayipi ensimbi. Uhlaka lo mklamo hhayi kuphela uyaqina emotweni, kodwa futhi ivumela inkululeko eyengeziwe ukuqamba amayunithi.
Inkampani Russian "Lada-ohlwini" kuveza multi-ungqimba plastic ishidi. It wasetshenziselwa ukudala Suv yangaphandle futhi ingaphakathi "Apal-2154", futhi usebenzisa cleaner entsha ukwakha ubuchwepheshe.
Ukwakha plastic - inqubo cell, ngakho iyiphi ikhasimende angakhipha ezibekiweko lobuchwepheshe ukubukeka ethize kanye nomklamo bese izimoto ekhethekile, kuhlanganise armored, e esikhathini esifishane.
Ngemva kwalokho Suv "Apal-2154" setha uphethiloli injini ne injector Vaz-21214, umthamo yayo - 1.7 litre umthamo - 82 hp Lapho isisindo 950 kg abagibeli abane ebhodini imoto singafinyelela ngesivinini esiphezulu 130 km / h, futhi asheshisa kuya ku-100 km / ihora - 13,6 imizuzwana.
Umshini obuphelele - kancane kuka 3.5 m, ububanzi nobude - amamitha nenxenye. Transmission - ibhukwana ezinhlanu-speed. uphethiloli ka 42 amalitha.
I wonke-wheel drive nguqulo ye imoto kuyafana kakhulu izici ukuba "Ensimini", kodwa u-20% alula kakhulu kunomoya wakhe.
Lapho isicelo ikhasimende angase afakwe yonke-wheel drive noma ezingemuva-wheel drive izimoto.
"Apal-21541" - i-four-wheel drive nguqulo ye imoto nge wheelbase enkulu 2.2 m, okuyinto ovunyelwe ukusebenzisa ukudluliswa ingashintshiwe kanye nokumisa nge "Niva". It ngcono design ingaphakathi kanye nokubukeka komzimba.
Ngokusho kweminye imithombo, lokhu ukuguqulwa ibizwa ngokuthi "Isihambi". Kodwa abalobi ngokwabo ungenaso isiqiniseko sokuthi lokhu ukwaziswa okunokwethenjelwa ngale ndaba kungekho.
German Suv TRAVEC ngesisekelo French Renault idasta Romanian Udizili 1.5 dCi 90 hp okufana kakhulu ezine-wheel drive "Stalker", ke ngoyisiwula kusinda kunakho kg 40 nje. Abalandeli ukubikezela leyo moto nemibi eziningi, futhi ikakhulukazi eyinkimbinkimbi lesevisi esikhundleni izingxenye.
SUV Khanyisa kunezinzuzo eziningi lisetshenziswa futhi enza.
Abanikazi akakwazi esabe ukuthi prorzhaveet imoto umzimba noma bola. Plastic linamandla amathonya zangaphandle. Njengoba ebusweni ezinemibala nenqwaba, imihuzuko kwalo ongabonakali. umzimba Plastic inesikhala esincane conductivity ezishisayo, umshini efudumele ebusika futhi epholile ehlobo.
Ukuze abalandeli, futhi lokhu kuqinisekiswa Izibuyekezo eziningi, ithuba ezithakazelisayo amancane, ngokuvamile, imali ukugibela ngumoya endaweni Convertible, ukwehlisa ophahleni.
Ukusetshenziswa izingxenye serial neyesifunda kwenza kwaba lula futhi kwasenza engabizi emva-sales service cishe noma iliphi idolobha eRussia. panel Plastic kungaba zisuswe futhi efakwe nje ukufakwa kokumqoka kuphela uma kunesidingo.
Ukuze abakhiqizi bezikhali engabizi imoto "Apal-2154" kanye nesakhiwo nezimpawu zokuhlela inqubo yayo ukukhiqizwa ivumela platform eyodwa ukudala ukulungiswa ezihlukahlukene ngokushesha futhi ngezindleko eziphansi. Kusukela Suv Kulula ukwenza, it linokwethenjelwa, izindleko zokukhiqiza yayo uphansi, okungenani kuqhathaniswa ukukhiqizwa yendabuko izimoto. Kuze kube muva nje, intengo imodeli kumila amangalelwe isigamu sesigidi sama-ruble, okuyilona elisebenzayo futhi inzuzo elingenakuphikwa imoto.
ERussia, "Apal-2154" namuhla hhayi kudedelwa. Abashayeli emfuna nokuzama oda kokubili ngesikhathi umkhonyovu futhi inkampani "Apal". Ukungabi kolwazi Ngethemba ukuthi Suv ukukhanya ngesicelo sabantu okwamanje ukukhiqiza umuntu phezu ezivulekile Russian iyothathwa, zisenza sibe amahemuhemu eminingi nasekuqageleni. Kodwa iphuzu emlandweni imoto ingakamiswa setha.
Amehlo enamahloni: yini okufanele akwenze ukuze asuse inkinga?